Dhagayso: Ignazio Cassis oo loo doortay Wasiir (Bundesrat) dalkaan Switzerland | SomaliSwiss Wararka Somaliswiss
Home / Barnaamijyo / Dhagayso: Ignazio Cassis oo loo doortay Wasiir (Bundesrat) dalkaan Switzerland
Baarlamanka Switzerland ayaa doortay Wasiir ama Bundesrat oo ah xubin sare oo ka mid noqnaya Golaha Fulinta dalkaan barkhanimadii Maanta oo Arbaca ah.
Bundesratka cusub Ignazio Cassis waxaa la tartamay 2 xubnood oo kale kana tirsan isla Xisbigiisa FDP iyagoo ku kala baxay codeeyntii labadaad , Ignazio Cassis oo ku guulaystay waxa uu halay 125 cod Pierre Maudet 90 cod iyo Isabelle Moret 28 cod.
56 jirkaan Cassis oo ka mid ahaa Baarlamaanka (Nationalrat ) waxa uu noqonayaa ruuxii 8-aad ee ka mid noqda Bundesrat oo ka socda Gobolka Ticino ee ku hadlka Taliyaaniga doorashadiisa maanta waxaa loo sababeeyay gobolkaas oo wax matalaad ah halin muda 18 sanadood ah.
Marka laga tago Xisbigiisa FDP waxa taageeray Xisbiyada kale sida SVP iyo CVP oo ku dooday in Gobolka Ticino 18 sanood uusan halin matalaad ka dib markii uu xilka iska casilay Flavio Cotti 1999 kaas oo ka soo jeday Gobolka Ticino.
Ignazio Cassis ka dib doorashadiisa iyo dhaariintii waxa uu la kulmay Bundesratka isaga oo gacan qaaday Madaxweynaha kaltanka Marwo Doris Leuthard iyo dhamaan Xubnaha kale bundesratka oo ku soo dhaweeyay Aqalka looga taliyo dalkaan Switzerland.
Bundsesrat Ignazio Cassis 20.09.2017
Ignazio Cassis iyo musharixiintii kale ee la tartamaya Pierre Maudet , Isabelle Moret
2 thoughts on “Dhagayso: Ignazio Cassis oo loo doortay Wasiir (Bundesrat) dalkaan Switzerland”
Maxamed Warsame September 22, 2017 at 8:01 pm
waa arin wanaagsan in Xukun wanaaag uu dalku galo
Ali Daahir September 24, 2017 at 4:29 pm
waan soo dhaweenaynaa doorashada Wasiirka